वायुसेवाको दुर्गति | चितवन पोष्ट
नेपाल वायुसेवा निगमले भर्खरै आफ्नो ६१औँ वार्षिकोत्सव मनाएको छ । निगमले आफ्नो वार्षिक उत्सव मनाउँदा राष्ट्रिय ध्वजावाहकप्रति गौरव गर्न सकेन । पर्यटन मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी लिएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निगम व्यवस्थापनप्रति तीव्र असन्तुष्टि पोख्दै सरकारले निगमको ऋण तिर्न काँध थाप्न नसक्ने आक्रोश व्यक्त गरे । ओलीले निगमप्रति किन आगो ओकल्न बाध्य भए ? यसका पछाडि खास कारण जिम्मेवार छन् । सरकारी स्वामित्वको यो संस्थान भ्रष्टाचारको पर्यायजस्तै बनिसकेको छ । नेपालजस्तो पर्यटनमुखी मुलुकका लागि राष्ट्रिय ध्वजावाहकको विशेष महŒव छ । देशको पहिचानसहित उड्ने राष्ट्रिय ध्वजावाहकलाई अन्तर्राष्ट्रिय गन्तव्यसम्म पु¥याउन सकेमात्र निगमले नाफा आर्जन गर्न सक्छ । अन्तर्राष्ट्रिय गन्तव्यका लागि भनेर गत वर्षमात्र खरिद गरेको वाइडबडी विमानले अझै लामो दूरीको उडान भर्न पाएको छैन । अहिले निगमका लागि विमानको अभाव छैन । तर, जापानलगायतमा रोकिएको उडान अझै सुरू हुन सकेको छैन । यतिसम्म कि आन्तरिक तथा बाह्य उडानका लागि भनेर चीनबाट ल्याइएका दुई वटा एमए ६० र चार वटा वाई १२ विमानसमेत विमानस्थलको पार्किङमा थन्किएका छन् । यस्तो अवस्थामा विमान व्यवस्थापनप्रति प्रधानमन्त्रीको आक्रोश उत्पन्न हुनु अस्वाभाविक होइन ।
अहिले नेपाल वायुसेवा निगमप्रति हेर्ने दृष्टिकोण कुनै कोणबाट पनि सकारात्मक छैन । किनभने, जतिपटक निगमले आफूलाई आवश्यक पर्ने जहान किन्ने प्रयास गरेको छ, त्यति नै पटक भ्रष्टाचार र आर्थिक अनियमितिताको प्रसङ्ग उठ्ने गरेको छ । निजी क्षेत्रले ल्याएका विमानले अत्यधिक नाफा कमाउँदै गर्दा निगम सधैँ घाटामा जानुको रहस्य के हुनसक्छ ? अनावश्यक राजनीतिक दबाब र प्रभावका कारण व्यवस्थापन अलमलमा पर्नु एउटा कारण हुनसक्छ भने प्रमुख रोग भ्रष्टाचार र अनियमितता नै हो । निगम टाट पल्टिने अवस्थामा पुग्नु अवश्य पनि शुभसंकेत होइन । निगम व्यवस्थापनको व्यावसायिक क्षमता सुधार नभई राज्यले जतिसुकै ऋण लगानी गरे पनि बालुवामा पानी हालेसरह हुनेछ । निगम व्यवस्थापनको कामकारबाहीप्रति असन्तुष्टि पोखेरमात्र हुँदैन । निगमको सुधारका लागि सरकारको भूमिका पनि स्पष्ट हुनुपर्छ । निगम व्यवस्थापन कमजोर हुनुमा सरकार र राजनीतिक नेतृत्व पनि दोषमुक्त रहन सक्दैनन् । निगमले कहिले विमान नभएको बहानामा निजी कम्पनीको विमान भाडामा लिएर चलखेल गर्ने, आफूसँग विमान भएर पनि उडाउन नसक्ने, विमान खरिद प्रक्रियामा घोटाला गर्नेजस्ता अनगिन्ती त्रुटिका कारण निगमको दुर्गति भएको हो । यो नियति कायमै छ ।
निगमको जहाज खरिद प्रक्रिया कहिल्यै पनि पारदर्शी बन्न सकेन । जहाजको वास्तविक खरिद मूल्य नखुलाइनु, मनलाग्दी ढंगले रकम बढाउँदै लगिनु, चर्को ब्याजदरमा ऋण लिएर खरिद गरिएका जहाजहरु ग्राउन्डमै थन्किनुले निगम उन्नतिमा लम्किन नसकेको हो । त्यसमाथि कमजोर व्यवस्थापन, उच्च सञ्चालन लागत, व्यावसायिक योजनाको अभावजस्ता समस्याले निगम टाट पल्टिने अवस्थामा पुगेको हो । निगमले व्यावसायिक योजनाका साथ नाफामूलक गन्तव्य खोजी गरी हवाई सम्झौता गर्न सक्नुपर्छ । प्रधानमन्त्रीले निगमको व्यवस्थापनमा सुधार गर्न विशेष भूमिका खेल्नैपर्छ । वाइडबडी जहाज खरिद प्रकरणमा प्रतिनिधिसभाको लेखा समितिले अध्ययन गरी सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन सरकारले स्वीकार गरेन । बरु न्यायाधीशको संयोजकत्वमा छुट्टै समिति गठन गरेको घोषणा ग¥यो । दुर्भाग्य, त्यो समिति अझै टुंगो लागेको छैन । सरकार सुशासनकै पक्षपाती हो भने लेखा समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने सामथ्र्य देखाउनुपर्छ । अनियमिततामा जोसुकै मुछिए पनि प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । ‘सानालाई ऐन, ठूलालाई चैन’ भएसम्म निगममात्र होइन देशकै दुर्गति हुने भएकाले निगम व्यवस्थापन सुधार गर्न सरकारले ‘एक्सन’ लिनु आवश्यक देखिन्छ ।